Showing १-१० of १४ items.
धरानका सबै खाले व्यवसायीलाई ३५ प्रतिशत कर छुट दिने कार्यपालिकाको प्रस्ताव
धरान / धरान उपमहानगरपालिकाले सबै खाले व्यवसायीहरुको करमा ३५ प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव आज बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । आज बसेको कार्यपालिका बैठकले धरानमा संचाललित सबै खाले व्यवपार व्यवसायीहरुको लागि ३५ प्रतिशत कर छुट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव आगामी असार ३० र ३१ गते हुने नगरसभाले अनुमोदन गरे पछि कार्यन्वयन हुने मेयर लिक राईले जानकारी दिएका छन् । कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसायहरु संचालन हुन नसकेको कुरालाई मध्यनजर गरेर व्यवसायीहरुलाई केही राहत होस् भनेर छुट गर्ने निर्णय गरिएको मेयर तिलक राईले जानकारी दिए । आज बसेको बैठकले वडागत आर्थिक ऐनसमेत पास गरेको छ ।
धरान उपमहानगरले 'तीन पाने रक्सी'लाई ब्रान्डिङ गर्ने
धरान/धरान उपमहानगरपालिकाले अव ‘तीनपाने रक्सी’ लाई ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ । जनजातिकाे सहर भनेर चिनिएको धरानमा अब तीन पाने रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकाे छ । उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले बुधबार प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रमकाे १३० नम्बर बुँदामा उक्त कुरा समेटिएकाे छ । ‘‘आदिवासी जनजातिहरूको पुस्तैनी कला र संस्कृतिको रूपमा रुपान्तरण हुँदै आएको ‘तीनपाने रक्सी’ लाई पहिचान र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरी व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम लागू गरिने छ । यसका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग
धरान / धरान उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ७१ करोड ३५ लाख ४३ हजार ५ सय बराबरको बजेट आज प्रस्तुत गरेको छ । उपमेयर मञ्जु भणडरीले सो बरावरको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन । यो चालु आर्थिक बर्षभन्दा करिब ५ करोड कमको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । चालु बर्षको बजेट १ अर्ब ७७ करोड ९१ लाख रहेको थियो । कोरोना महामारीको कारण आन्तरिक आयमा भारी संकुचन देखिएकोले आगामी बर्षदेखि लागु हुने गरी जनप्रतिनिधिहरुको पोसाक भत्ता कटौती गरिएको मेयर तिलक राईले जानकारी दिए । आगामी बर्षको आन्तरिक आयतर्फ ५३ करोड ४२ लाख ४३ हजार ५ सय अनुमान गरिएको छ । संघीय समानीकरण अनुदानतर्फ ३० करोड ७६ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट ९५ लाख ३५ हजार आ
३,३९६ पटक पढिएको
धरान / धरान उपमहानगरपालिकाका उपनिर्वाचनको तयारी सबै दलहरुले थालेका छन् । आफ्ना उम्मेद्वारहरु लिएर पार्र्टीहरु जनताको घर दैलोमा पुगेका छन् । निर्वाचन आउन अव २४ दिन बाँकी रहदा यहाँका दलहरु आ–आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट माग्न व्यस्थ भएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आइतबार साँझ मेयरको उम्मेद्वारमा प्रकाश राईलाई बनाउने निर्णय गरे पछि सोमबार निर्वाचन परिचालन कमिटी तथा उम्मेद्वार घोषणा गरि आजदेखि मैदानमा उत्रेको छ । धरानको विकट वडा ४ नं. को हर्दिया दानावारी, पत्राङवारी देविगाउँबाट चुनाव प्रचार शुरु गरेको छ । मेयरका प्रत्यासी प्रकाश राईसहितको जम्बो टोली तालिका बनाएर प्रचा
प्रकाश राई सुनसरी नेकपाको राजनीतिक वृतमा नचिनिएको नाम होइन । २०३५ सालदेखि पार्टीमा निरन्तर काम गरेका राई इमान, निष्ठाको राजनीति गर्ने भएका कारण कुनै पनि लाभको पद भागबण्डामा परेन । उनी भन्दा पछि राजनीति गरेका व्यक्तिहरु माथि पुगिसक्दा पनि उनी धराने कार्यकर्ताहरुमा प्रकाश छरेर निष्ठाको राजनीति गरिरहे । माथि पुगेका धेरै नेताहरु ‘पार्टीलाई हामीले बनाएका’ भनेर कुर्लिन्छन् । ‘पार्टीमा आफ्नो ठूलो योगदान छ’ भनेर प्रचार गर्छन् तर आफु ओझेलमा परेर अरुलाई प्रकाश दिने उनै प्रकाश राई भने ‘पार्टीले आफुलाई बनाएको’ तर्क गर्छन । उनी भन्छन्–पार्टीले मलाई योग्य बनाएको छ
१,६९२ पटक पढिएको
१,५३९ पटक पढिएको
धरान / धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहदा ५८ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । विशेष गरि उपमहानगरले घोषणा गरेको गौरवको आयोजना र खानेपानी परियोजनामा छ्ट्याएको बजेटमा खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ । उपमहानगरका बरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीका अनुसार चालु बजेट ८३ करोड ९५ लाख, ५६ हजार ८ सय ४८ रुपैयाँमा बैशाखसम्ममा ४८ करोड ७१ लाख ८८ हजार ६ सय ४१ रुपैया मात्र खर्च भएको छ । यो ५८.०९ प्रतिशत हो । यता पूजीगत खर्चमा ९५ करोड ४ लाख ४३ हजार एक सय ५१ बजेटमा ५५ करोड ३३ लाख ४९ हजार ३ सय ६२ रुपैया मात्र खर्च भएको छ । धरान उपमहानगरले गौरवका आयोजना भनेर ७ वटा आयोजनाका ल
१,२२७ पटक पढिएको
प्रदेश नं. १ मा साहसिक खेल पर्यटनको सम्भाव्यताबारे धरानमा छलफल
धरान / धरान उपमहानगरपालिकाले उपमहानगरभित्र के कस्ता साहसिक पर्यटकीय खेलका सम्भावना छन भन्ने विषयमा छलफल शुरु गरेको छ । धरानमा १६ वटा साहिसिक खेलहरु मध्य ५÷६ वटा हाल पनि खेलहरु भईरहेकाले अझ यसको विस्तार र खेलको माध्ययमबाट कसरी पर्यटकहरु भित्राउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले माउन्टेन स्पोर्ट फेडेरेशनसँगको सहकार्यमा शनिवार धरानमा सहासिक तथा पर्यटकीय खेल सम्बन्धि अन्र्तक्रिया गरेको छ । धरानमा हाल साइकिलिङ, पाराग्लाइडिङ, क्यानोनिङ, फ्लाईङ जीप, बोटिङ, रेस, बाईक रेसलगायत खेलको सम्भावना रहेको छ । केही खेलहरु नीजी स्तरबाट भइरहेका छन् । कार्यक्रममा माउन्टेन स्पोर्ट फेडेरेसनका अध्यक्ष गोविन्द भ